အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: အချဉ်ပေါင်းများ အပိုင်း (၁)
၁.၅) နောက်တိုးအတင်းအနေနဲ့ တော်ဝင်စင်တာရဲ့ ဓါတ်လှေကားတွေဟာ အင်မတန်မှ စတုပစ်ဖြစ်ကြောင်း တခုနှိပ်မှ တခုသာလာကြောင်း ဆိုင်များ၏ အခင်းအကျင်းသည်လည်း ကာစတမ်မာ ဖရန်းလီးမဖြစ်ကြောင်း ကြပ်ညပ်ပြွတ်သိပ်နေကာ ကြည့်ရှုရတာ အဆင်မပြေလှကြောင်း....စာဘတ်သူတဦး က ထည့်ဝင်အတင်းတုတ်ပေးပါတယ်။ တီချမ်းက အပရူလုပ်ပါတယ်။ ဓါတ်လှေကားတွေဟာအင်မတန်ကို အဆင်မပြေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တိုး နောက်တခုအနေနဲ့အပေါ်ဆုံးထပ် ဖွတ်ကော့ဒ် မှာ ရှိတဲ့ တခုတည်းသော ဒင်းဆမ်း ဆိုင်က အသိုးတွေအနံ့ထွက်နေတာ တွေ ရောင်းတာ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းလည်း ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံအရ အတင်းသစ်တခု ထပ်မံ ရရှိပါတယ်။
XOXO....bisou bisou.....gossip girl...
Posted by တီချမ်း at 4:55 PM
Anonymous July 6, 2011 at 9:31 PM
ရောင်းသူ-ကြည့်သူ (အိမ်မှာ အိုက်လို့ အေးအောင် လာနေတာ) များဖြင့် စည်ကားလျက်ရှိ ... :D
jr July 6, 2011 at 11:56 PM
အချဉ်ပေါင်းဆိုလို့ စားတဲ့ အချဉ်ပေါင်းမှတ်လို့ :D
Some more gossips...please!!!
Anonymous July 7, 2011 at 7:49 AM
T Chan...please share some more info about Taw Win Condo...installment schemes and prices...thanks!!!
Anonymous July 7, 2011 at 12:35 PM
:-) :D :P...Agree with T-chan.
sweetpeony July 7, 2011 at 3:34 PM
တီကလဲ အမှန်တွေ ပြောနေပြန်ပြီ...း))))))))))
စန်း February 20, 2012 at 3:11 PM
တီချမ်းရဲ့ အချဉ်ပေါင်းများဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ အော် ဇီးသီးတို့ သရက်သီး ချဉ်ပေါင်းတို့လုပ်ထားတယ်ထင်တာတကယ် :) အဲဒါနဲ့စဖတ်တော့ အချဉ်ပေါင်းဆိုပီး ရေးထားတဲ့စာတွေက တီချမ်းအတွေ့အကြုံတွေ ကို ဒါပေမယ့် ဖတ်လို့လဲ ကောင်း တချို ဟာတွေဆိုကိုလဲမသိတော့ (ဗဟုသုတရတယ်)လေ ဆက် ဖတ်ရင်းနဲ့ နောက်ပိုင်းတော့ပါမယ်နဲ့တူတယ်ဆိုပီး အချဉ်ပေါင်းများ အပိုင်း (၁) ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်က စာတွေကိုဖတ်တော့မှ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်တော့တယ် . အချဉ်ပေါင်းဆိုတာ.. ဒါပေမယ့် ကျေးဇူး ပါ တီချမ်းရဲ့ blog ကို သိတာမကြာသေးပေမယ့် ခု သူများတွေနဲ့မှီအောင်အချိန်အားတိုင်းဝင်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ် ရှင် :)
AMK January 24, 2013 at 9:55 AM